Tahriibayaal laga cabsi qabo in ay ku dhinteen Mediterranean-ka
Ku dhowaad 150 Tahriibayaal ah ayaa laga cabsi qabaa in ay ku dhinteen Badda Mediterranean-ka ee dalka Libya, kadib markii maalmo ka hor ay ka baxeen Magaalada Sabratha oo xigta Waqooyiga dalka Libya.
Muhaajiriinta ayaa la arkayay iyaga oo saaran Doon Alwaax ah oo aad u buuxday, inta uu socday Howlgalka Samata-bixinta,sida ay qortay Wakaaladda Wararka ee Reuters.
Warbaahinada gudaha ayaa qoray in Muhaajiriintan ilaa iyo hada laga soo badbaadiyay wiil 16 jir ah oo u dhashay dalka Gambia, kaasi oo ka mid ahaa Muhaajiriinta saarnaa Doonta degtay.
Markab ay leedahay Hay’ad gar gaar Luvente ayaa helay wiilkan isagoo haysta haantii shidaalka Doonta oo sabaynaya Badda. Wiilkan ayaa markii dambe waxaa la geeyay Jasiirada Sicily gaar ahaan Lampedusa.
Wiilkan ayaa sheegay in uu rumeysan yahay in dhammaan dadkii la socday Doonta ay dhinteen, hase yeeshee waxaa socda weli dadaalo lagu doonayo in lagu soo badbaadiyo haddii ay dad nool jiraan.
Hay’adda Socdaalka Caalamiga (IOM) ayaa sheegtay in ay wado dadaaalo lagu soo badbaadinayo Muhaajiriintan ku qalibmay Badda Mediterranean-ka, kuwaasi oo ilaa iyo hada aanan la ogeyn wadamada ay u dhasheen.
Doontan degtey ayaa la sheegay inay ka soo shiraacatay labo maalmood ka hor Sabratha dalka Libya ayna saarnaayeen dad ku dhow labo boqol oo ruux kuwaas oo badankood ay ahaayeen dad ka soo jeeda wadamada ka hooseeya Saxaraha waxaana ka mid ah shan carruur ah iyo Haween.
Labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa laga soo badbaadiyay dad gaaraya 1,100 Tahriibayaal ah, waxaana ku dhintay illaa iyo Lix Boqol oo Tahriibayaal ah.